तिथि मेरो पत्रु » गर्मी Doggie शिष्टाचार को लेस्ली गरेको शीर्ष दस Dos र Don'ts
द्वारा लेस्ली Schnur
गर्मी Doggie शिष्टाचार को लेस्ली गरेको शीर्ष दस Dos र Don'ts
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: सक्छ. 21 2020 |3मिनेट पढ्न
राम्रो कुकुर व्यवहार सबै वर्ष गोल महत्त्वपूर्ण छ, कुकुर आफ्नो leashes र मान्छे देखि हो तर जब न्यानो मौसम मा महत्वपूर्ण हुन्छ, सामान्य रूपमा, आफ्नो rockers बन्द छन्. जब canines र मानिसहरूलाई लन साझा गर्दै, समुद्र तट, Frisbees र पैदल यात्रा ट्रेल्स, दुनिया collide. म यो घमाइलो दिन छ किनभने एउटा थप rottweiler बस वरिपरि unfettered घुम्न अनुमति देख्न यदि म चिच्याएर हुनेछ. अनि म कुकुर जस्तै. यो तिनीहरूलाई गर्ने आफ्नो मालिक खराब हेर्न हो. त्यसैले, मालिक, यहाँ गर्मी शिष्टाचार मेरो नियम आफ्नो कुकुर र मेरो लागि हो.
1. आफ्नो कुकुर आफ्नो छिमेकीको hydrangeas मा पिशाब नदेऊ. तपाईंको छिमेकीलाई उनको बगैंचामा खिल बनाउन समय र प्रयास को एक धेरै खर्च गरेको छ र कुकुर मूत्र त्यो पानी आज फूल आवश्यक यसो त्यो अर्थ के होइन.
2. पार्क मा आँगन मा आफ्नो कुकुर poop नदेऊ. (म सबै कुकुर poop सधैं उठाउनु प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता छ, तपाईं अलास्का को Wilds बस्न नभएसम्म? अमेरिकीहरू जाँदा तपाईं कुकुर poop आफ्नो घरपछाडि निषेचन निम्ति स्वतन्त्र गर्न, तर त्यसपछि, म तपाईंलाई थाहा चाहँदैनन्।) गर्मी समयमा, पार्क लन पिकनिक लागि प्रयोग गरिन्छ, बल खेल, र सामान्य बारेमा lolling. एक लन मा बारेमा lolling पछि आफूलाई मा भेट्टाउन चाहन्छ अन्तिम कुरा केही unidentifiable छ, केही धेरै पहिचान र गन्हाउने पदार्थ या बुरा.
3. आफ्नो कुकुर अर्को कुकुर वा आफ्नो साथीको नयाँ Pumas मा लार नदेऊ. यो राम्रो होइन र यो घृणित हो. (एक तर्क हुन सक्छ कि तापनि $100 टेनिस जूता एक सानो लार योग्य) अनि त्यसमाथि, drooling अक्सर तिर्खाले एक लक्षण छ, त्यसैले आफ्नो कुकुर पर्याप्त पानी रही छ पक्का हुन. शायद त्यो सिर्फ एक धेरै slobbers गर्नेहरूलाई कुकुर को एक हो. जेहोस् उहाँले एक Bichon डुवेर गर्ने मौका छ पहिले दूर लार मेटाउने आफ्नो काम छ.
4. आफ्नो कुकुर एक पूल पौडी राखौं गर्नुहुन्छ, तर तिमी त्यहाँ छौ भने मात्र आफ्नो सुरक्षा को लागि हेर्न, पूल आफ्नो छ, तपाईं केश सफा र तपाईं तिनलाई आफ्नो काँध मा तपाईं मिल्यो गर्नुपर्छ विशेष गरी यदि एक चिकन झगडा भाग लिन अनुमति छैन.
5. पिकनिक आफ्नो कुकुर लिनुहुन्छ तर उनको poop गरौं र त्यसपछि बालुवा यो कवर छैन. अनुहार मा बालुवा पठाउन तौलिया मा उनको संख्या नदेऊ. उनको पौडी गरौं र त्यसपछि नजिकै sunbathers आफु बन्द थरथर नगर. एक सय गज समुद्र तट तल आफ्नो कुकुर ले र उनको हृदय सामग्री उनको सर्फ गरौं गर्नुहुन्छ.
6. एक पोखरीमा आफ्नो कुकुर पौडी नदेऊ तपाईं संग परिचित छैनन्. यो जीवाणु वा रोग बोक्न सक्ने. केन्द्रीय निकुञ्जका हार्लेम और हालै पाइएन भनेर एक जस्तै एक गोहीको उल्लेख छैन, कुकुर स्नान को लागि एक लोकप्रिय स्थान. त्यसैले तपाईं एक अज्ञात पोखरीमा आफ्नो कुकुर पौडी गरौं अघि, तपाईं यो ठीक छ भनेर निश्चित हुन त्यहाँ पहिलो पौडी खेल्न.
7. आफ्नो कुकुर संग यात्रा गर्नुहुन्छ तर एक होटल कुकुर अनुमति दिन्छ किनकी भन्ने अनुमान छैन, होटल मा सबैलाई एक कुकुर व्यक्ति छ कि. वास्तवमा, कसैले मान एक कुकुर व्यक्ति छ, र तपाईं फिर्ता अनुमति हुन सक्छ. एक न्यूनतम गर्न भौंकनेको राख्ने प्रयास गर्नुहोस् (आफ्नो कुकुर पनि छ), सधैं एक पट्टा मा आफ्नो कुकुर राख्न, बारम्बार उनको हिंड्न र उदारता चुच्चो.
8. वृद्धि मा आफ्नो कुकुर ले तर हराएका प्राप्त गर्दैन त एक पट्टा मा आफ्नो कुकुर राख्न र सँगी पदयात्री यात्रा गर्दैन गर्नुहुन्छ. यो योसेमाइट फल्स को माथि देखि एक लामो खस्छ छ.
9. पहिलो पाहुना सोधेर बिना एक पूल पार्टी वा एक बार्बिक्यु आफ्नो कुकुर ले मत. यो गर्मी छ र बस किनभने यो यस्तो सुन्दर दिन आफ्नो घर छोड्ने अर्थ देखिन्छ, तपाईं जान जताततै तपाईं आफ्नो कुकुर ले मत. तपाईं कार मा उनको छोड्न सक्दैन (यो बाटो पनि तातो हुन्छ), र तपाईं एक पोल बंधे फुटपाथ मा उनको छोड्न सक्दैन (यो yelping र रोइरहेको खलबलिन्छ शान्ति, आफ्नो pookie चोरी हुन सक्छ मिल उल्लेख छैन). तपाईं कुकुर लागि कहीं उपयुक्त गइरहेका छैनन् भने घर मा आफ्नो कुकुर छोड्न गर्नुहुन्छ. त्यो एक्लो हुनेछैन. त्यो कृतज्ञ हुनेछु. त्यो सानो कुरा गर्न हुनेछैन.
10. तिनले पनि प्रचलित छ विचार किनभने आफ्नो कुकुर कपाल ऊन काट्न नगर. त्यो anthropormorphizing भनिन्छ, समावेश तर उहाँलाई एक रेनकोट र booties लगाउने बनाउने मात्र सीमित छैन भनेर doggie यातना एक निश्चित प्रकारको जो छ. एक कुकुर कपाल सुन्दर व्यक्तिहरूलाई मा तातो दिन मा सुन्दर र न्यानो यो राख्छ. (तपाईं यस थाहा छैन भने, आफ्नो स्थानीय पुस्तकापणमा गर्न तुरुन्तै जान र आफैलाई एक कुकुर हेरविचार प्रथम पुस्तक गर्नुहोस्, मेरो नयाँ पुस्तक संग, कुकुर वाकर
10 पुरुषहरु को लागि पहिलो तिथि Outfit सुझाव
ग्रह तपाईंको प्रेम भाग्य भविष्यवाणी गर्न सक्छन् कसरी
6 प्रश्न जोडे एक पत्रु रही अघि विचार गर्नु पर्छ
हरेक मानिस पहिलो तिथि मा के वेवास्ता गर्नुपर्छ